विमान दुर्घटना : मृतकका शव त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा, पोष्टमार्टमको तयारी – Nepali Health
विमान दुर्घटना : मृतकका शव त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा, पोष्टमार्टमको तयारी
२०७४ फागुन २९ गते ८:२० मा प्रकाशित
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा जम्मा गरिएका शवहरु
काठमाडौँ, २९ फागुन । युएस बंगला विमान दुर्घटनाका मृतकहरुको ४९ वटा शव पोष्टमार्टमलागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुरयाइएको छ । आज केही बेरपछि पोष्टमार्टम गरी परिवार तथा आफन्तलाई शव बुझाउने तयारी भइरहेको छ ।
अधिकांश शवहरु डढेको कारण चिन्न मुस्किल भइरहेको छ । यस्ता शवहरुको डीएनए परीक्षण गरि आफन्तलाई बुझाउने तयारी भएको स्रोतले बतायो । ‘कतिपय त पहिचान गर्न सकिने अवस्थामा छ तर कतिपय भने पूर्ण रुपमा जलेर चिन्न मुस्किल भइरहेको छ,’ फरेन्सिक डिपार्टका एक जना चिकित्सकले भने ।
सोमबार बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट काठमाडौँका लागि उडेको सो विमान दिउसो त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा दुर्घटनामा परेको थियो । सो क्रममा ४९ जनाको मृत्यु भएको थियो । बाँकी २२ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम सरकारले तिर्ने तयारी
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको निर्देशकमा प्राडा प्रेम खड्गा
हैट ! डाक्टर बन्ने विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्न यस्तो फोहर पानी ?
रिक्त रहेको खोप सम्बन्धि तीनवटा समितिमा पदाधिकारीको पदपूर्ति
सचिव केदारबहादुर अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले
विमान दुर्घटनामा १७ जना मेडिकल विद्यार्थी परेको आशंका
‘विमान खरानी भयो तर पुस्तक जलेन’